Iyo Nyowani Nyowani Chinhu Podcast: Ine Muenzi Douglas Karr | Martech Zone
Chipiri, July 25, 2017 Douglas Karr
MuIndianapolis, kune chaiko kufamba mune yekushambadzira tekinoroji nzvimbo pamwe nekukura kwenhamba yemari yeHighAlpha - iyo yakazvarwa kunze kweExpactTarget. Takagovana nezveimwe yemakambani, Quantifi, uye akabvunzurudzwa CEO RJ Talyor pane yedu Martech Kubvunzana akateedzana. Vhiki rino, podcast nyanzvi Liz Prugh we Fandom Yakachena mukurumbira uye RJ vakasarudza kundibvunzurudza podcast yavo, Chinhu Chitsva Chitsva!
Basa reiyo Nyowani Nyowani Chinhu:
Basa redu kuThe New New Thing kuburitsa sainzi yekushambadzira uye kuteedzera chokwadi uye pachena mukushambadzira. Iyo Nyowani Nyowani Chinhu chinogara kumberi kwekumberi kwehunyanzvi, uye inopa vatungamiriri veshambadziro yedhijitari nekurudziro, sei-kutungamira, kubvunzurudza uye op-eds nevatungamiriri veindasitiri, yakamisikidzwa nhau yekutengesa yedhijitari, uye ruzivo rwunotungamirwa nedata.
Sezvo ini ndichiwanzo mubvunzurudzo-ER, ini ndisingawanzo kuwana mukana wekuva mubvunzurudzo-EE saka ndaida kugovera chikamu pano. Chikwata chakaisa pamwe mimwe mibvunzo inonetsa yakabva pakuwana kwandakaita kwese kwandinoenda kune zvandiri kufunga nezveindasitiri yedu iri kukurumidza kuchinja. Unogona kushamisika dzimwe dzemhinduro dzangu maererano nenjodzi, kugona, uye kugamuchirwa.
Kutenda kwakakosha kuna Liz naRJ nekuve neni pachikamu. Ini handiwanzo kuwana kugovera yangu yega nyaya! Iva nechokwadi cheku nokunyora magwaro uye vanoenderana, vane zvinoshamisa bvunzurudzo neinoshamisa renji yevaenzi.
Tags: DK New Mediadoug karrdouglas karrliz prughKushambadzira Podcastfandom yakachenarj talyor